Sadio Mané Oo Ka Hadlay Sirta Ka Dambeysa Awooda Kooxda Liverpool Iyo Natiijooyinkii Wanaagsanaa Ay kasoo Sameeyeen Kulamadii Lasoo Dhaafay. – GOOL24.NET
Sadio Mané Oo Ka Hadlay Sirta Ka Dambeysa Awooda Kooxda Liverpool Iyo Natiijooyinkii Wanaagsanaa Ay kasoo Sameeyeen Kulamadii Lasoo Dhaafay.
February 28, 2018 Cabdi Yare
Laacibka reer Senegale iyo kooxda Liverpool Sadio Mané ayaa wuuu ka warbixiyay in isku xirnaanta kooxda ay sabab u tahay natiijooyinka wanaagsanaa ay Reds kasoo gaadhay xiliyadii lasoo dhaafay tartamada Premier League-ga iyo Champions League.
Liverpool ayaa hal mar guul darreysatay kulamada horyaalka Premier League-ga tan iyo bishii October waxayna haatan fadhidaa kaalinta saddexaad ee dhanka kala sareynta iyagoo 2 dhibcood oo kaliya u jira booska kaalinta 2-aad ay ku jirto kooxda Manchester United.
Dhinaca kale Reds ayaa kusii dhawaaneysa inay u gudubto wareega 8 dhamaadka ee Champions League-ga, kadib markii ay kulanka lugta hore ee wareega 16-ka Champions League-ga ay guul kaga soo gaadheen kooxda reer Portugal ee FC Porto.
Liverpool ayaa Sabtidii lasoo dhaafay gaadhay guusheedii saddexaad afartii kulan ee lasoo dhaafay horyaalka Premier League-ga, Kadib markii ay 4-1 ku garaaceen West Ham United, wuxuuna Sadio Mané aaminsan yahay in isku xidhnaanta kooxda ay sabab buuxa u tahay inay sameeyaan natiijooyin wanaagsan.
Sadio Mané oo la hadlayay wargeyska Liverpool Echo ayaa wuxuu yidhi: “Hamiga kooxda waa mid aad u fiican, kalsoonida kooxda waa ay taagan tahay, sidaasi darteed waxaan u maleynayaa inaan ku suganahay wadada saxda ah”.
Laacibka reer Senegale oo hadalkiisa siiwata ayaa wuxuu yidhi: “Ciyaaryahan walba waa uu ku faraxsan yahay inuu ka garab ciyaaro saaxiibkiis, waxaan u maleynayaa inay tani tahay awooda kooxda, iyo ujeedada aanu leenahay dhamaantayada”.
Mané ayaa wuxuu hadalkiisa kusoo xidhay: “Waxaan sii wadi doonnaa inaan si adag u shaqeyno oo aan soo bandhigno wax walbo oo ay awoodeenu gaarsiisan tahay, marka aan soo galno garoonka, si aan u sii joogteeno isku dayga ah inaan guuleysano Waxaan dareemayaa inay kooxdu si haboon ay u sameeneyso horumar”.
Si kastaba Liverpool ayaa 15 dhibcood ka dambeysa hogaamiyaasha xili ciyaareedkan ee horyaalka Premier League Manchester City, kahor 10 kulan ee dhamaadka xili ciyaareedkan.
Liverpool ayaa martigelin doonta Newcastle United Sabtida, waxaana u xigi doona kulanka lugta labaad ee Champions League ay la ciyaari doonto kooxda Porto, saddex maalmood kahor inta aysan la ciyaarin kulanka adag ee horyaalka Premier League-ga kooxda Manchester United ee ku aadan 10-ka bisha March.